काठमाडौं : सेयर बजारले नयाँ उचाई निर्माण गर्दैछ । पछिल्लो समय बजारमा नयाँ उत्साह थपिएको छ । खरिदबिक्री रकमले दिनहुँजसो नयाँ रेकर्ड कायम गर्दैछ । यही बेला तपाईंलाई पनि सेयर बजारमा लगानी गर्न रहर लागेको होला । तर कसरी लगानी गर्ने अनि जोखिमबाट कसरी सुरक्षित हुने ? कुन कम्पनीमा कुन अनुपातमा लगानी गर्दै जाने ? लगानी गर्दा विशेष गरी के–कस्ता पक्षमा ध्यान दिने ? यी प्रश्नहरु सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन् ।
सेयर बजारमा लगानी गर्दा तपाईंलाई यसका सैद्धान्तिक र व्यवहारिक ज्ञान अति आवश्यक हुन्छ । सेयर बजारमा जानेर, बुझेर मात्र प्रवेश गर्नुपर्छ । सैद्धान्तिक ज्ञान बिना गरिने लगानी जोखिमयुक्त हुन सक्छ । पर्याप्त ज्ञान र सीप अभावमा बजार बढ्दा पनि कमाउन मुश्किल पर्न सक्छ । हो, यही बजारका विषयमा महत्वपूर्ण ज्ञान बाँड्ने क्रममा नेपाली पैसाले फेरि एक पटक सुरु गर्दैछ, सेयर बजार तालिम ।
यस तालिममा सेयर बजार के हो ? कसरी प्रवेश गर्ने, लगानी गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त तरिका के हो, कस्ता कम्पनीमा लगानी गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने बारेमा विस्तृतमा सिकाइनेछ । यसैगरी, सेयर बजारलाई प्रभावित पार्ने प्रमुख पक्ष के–के हुन् ? सेयर बजारमा लाग्दा के–के कुरामा विशेष ध्यान दिने, नीतिनियम, सरकार, नियामकको भूमिका सेयर बजारसँग कसरी अन्तर सम्बन्धित हुन्छ ? तपाईं कस्तो किसिमको लगानीकर्ता बन्ने ?
बजारका महत्वपूर्ण सूचना कसरी अध्ययन गर्ने भन्ने लगायतका बारेमा पनि गहनरुपमा सिकाइनेछ । यसबाहेक बजारसँग सम्बन्धित थुप्रै महत्वपूर्ण पक्ष पनि तालिमको विषय हुनेछ । सेयरमा कसरी सुरक्षित लगानी गर्ने ? बजार बढ्दा अधिकतम लाभ लिन सक्ने अनि घट्दा न्यून मात्र क्षति व्यहोर्ने उपाय के होला ? कस्ता कम्पनीमा लगानी गर्ने अनि ती कम्पनी छान्ने प्रमुख आधार के ? भन्ने बारेमा पनि सहभागीले गहन रुपमा सिक्न सक्नेछन् ।
आगामी चैत २ देखि चैत ४ गतेसम्म सञ्चालन हुने यो तालिम प्रत्येक दिन साँझ ४ बजेदेखि ६ बजेसम्म चल्नेछ । तालिम नेपाली पैसाको कार्यालय पानीपोखरी, काठमाडौंमा आयोजना हुनेछ । विस्तृत जानकारीका लागि ४४१०४८८ वा ९८०१११३१२४ मा फोन गर्नुहोस् ।
आफनो नाम दर्ता गर्न तथा तालिम र कोर्षका बारेमा थप जानकारी पाउन यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् ।